nb bank(nb bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
पहिलोपटक ७ प्रदेशका उत्कृष्ट ७ कृषक ‘राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड’ बाट सम्मानित
१० वर्षसम्म उस्तै ब्याज पाइने उपकरणको खोजीमा हुनुहुन्छ ? खुल्दैछ लगानीको अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले आगामी जेठ १० गतेदेखि रु. २ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले ‘१०.२५ एनबिबिएल डिवेञ्चर–२०८५’ निश्कासन गर्न लागेको हो । ऋणपत्र खरीद गर्न इच्छुकले छिटोमा जेठ १४ गतेभित्र र सो अवधिसम्म पनि बिक्री नभए ढिलोमा असार ८ गतेभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । एनबी बैंकले रु. १००० अंकित दरका...
एनबी बैंकलाई रु. २ अर्बको ऋणपत्र निश्कासनको अनुमति, ब्याज कति ?
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले नेपाल बंगलादेश बैंकको रु. २ अर्ब बराबरको ऋणपत्रलाई निश्कासन अनुमति दिएको छ । यो बैंकलाई बोर्डले '१०.२५ एनबिबिएल डिवेञ्चर-२०८५' निश्कासनको स्वीकृति प्रदान गरेको हो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रबैंकले ऋणपत्र निश्कासनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएसँगै वाणिज्य बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै ऋणपत्र...
नवील र एनबी बैंकबीच मर्ज हुन लागेको हो ? यसो भन्छन् अनिल शाह
काठमाण्डौ । नवील बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्ज हुने हल्लाले विगत केही दिनदेखि सेयर बजार प्रभावित भइरहेको छ । नवील बैंकका सीइओले एनबी बैंकले आफ्नो भाउ बढाउन आफूहरुसँग मर्ज हुन लागेको हल्ला सुनियोजित रुपमा चलाएको दाबी गर्दै समाचार आएपछि त्यसको प्रभाव एनबी बैंकको सेयर मूल्यमा परिरहेको छ । स्पष्ट आधारबिनाको सोही आशयको समाचारको...
एनपिएल बाहेकका अधिकांश सूचकमा एनबी बैंकको छलाङ !
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा अधिकांश वित्तीय सूचकमा छलाङ मारेको छ । बैंकले मंगलबार प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यो वर्ष वितरणयोग्य मुनाफामा ४१.१३ प्रतिशतको वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्ष ४३ करोड ८० लाख रहेको यस्तो नाफा...
नगद लाभांश घोषणा गर्ने लाइनमा एनबी बैंक पनि
काठमाण्डौ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निराश तुल्याउने गरी एकपछि अर्को गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले नगद लाभांश मात्र घोषणा गर्न थालेका छन् । नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिने बैंकको लाइनमा नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक पनि उभिएको छ । यो बैंकले कर समेत गरी लगानीकर्तालाई १०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बिहीबार...
काठमाण्डौ । नेपाल बङगलादेश बैंकले ग्राहकहरुलाई सगौरव बचत खाताअन्तर्गत दशैं शुभकामना योजना ल्याएको छ। यो योजनामा आवद्ध हुने ग्राहकहरुले आफ्ना खातामा १ लाख वा त्यसभन्दा बढी निक्षेप गरेमा बैंकले २५ ग्रामको चाँदीको सिक्का उपहार दिनेछ । बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार ग्राहकले निःशुल्क भिसा डेविट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल...
यस्तो बैंक शाखा: जहाँ म्यानेजरदेखि पियनसम्म महिला मात्रै छन् !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको भीडमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक समावेशी बैकिंग सेवा संचालन गर्ने एक छुट्टै पहिचान बोकेको बैंकको रुपमा प्रस्तुत छ । उसको एउटा शाखामा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा प्रबन्धकसम्म नै महिला कर्मचारी मात्र छन् । महिला कर्मचारीले मात्र चलाएको देशका केही सीमित बैंक शाखामध्येको यो पनि एक शाखा हो...
एनबी बैंकको खूद नाफा घट्यो, इपीएसमा पहिरो !
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकको खूद नाफा घटेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब १० करोड खूद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा बैंकको नाफा १ अर्ब २० करोडको उचाईमा थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा संभावित जोखिम व्यवस्थापनबाट १० करोड ५१ लाख फिर्ता ल्याएको समेत देखिएको छ । बैंकको संचालन मुनाफा...
'आउँदो मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी हट्नसक्छ !'
►ज्ञानेन्द्र ढुंगाना-अध्यक्ष(नेपाल बैंकर्स संघ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए) निकै चर्चामा छ ? -२८ वटा वाणिज्य बैंकको आपसी समझदारीमा बनेको संघ हो–बैंकर्स संघ । आफूलाई परेका समस्याको बिषयमा बसेर आपसी छलफल गर्ने, नेपाल राष्ट्रबैंकमा आफ्ना हकहितका अजेण्डा कसरी प्रस्तुती गर्ने...
दोश्रो त्रैमासको प्रगति: सबैभन्दा कमजोर माछापुच्छे बैंक, एडीबिएल र एनबी पछ्याउँदै
काठमाण्डौ । देशका सबै, २८ वाणिज्य बैंकहरुले दोश्रो त्रैमासको अपरिस्कृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका विवरणका आधारमा कुन बैंकले कस्तो प्रगति गर्दैछ वा कसको रफ्तार कस्तो छ भन्ने आँकलन भइरहेको छ । बिजशालाले केही समयअघि सबै वाणिज्य बैंकको मुख्य १० सूचकको चिरफारको प्रयास गरी विशेष सामाग्री प्रस्तुत...
बैंकरका नेताले नेतृत्व गरेको बैंक नै कमजोर, एनबीको इपीएसमा पहिरो
काठमाण्डौ । संभावित जोखिम व्यवस्थापन कोषबाट १० करोड बढी राइट ब्याक गर्दा समेत नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंक लिमीटेडले खूद नाफा बढाउन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २२ करोड ५० लाख खूद नाफा कमाएको चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १५ करोड ४० लाख मात्र नाफा कमाउन सकेको हो । नेपाल बैंकर्स संघका नेताहरुले नेतृत्व गरेका बैंकहरु...
एनबी बैंकले १२% सेयर र ३.७९% नगद लाभांश दिने
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को खूद नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७९ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनसहितको) वितरणको निर्णय गरेको छ । भदौ २४ गते बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय नियामक नेपाल राष्ट्रबैंक र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि...
एसबीआई र एनबी बैंकको इपीएसमा फट्याइँ, गल्ती सुधार्न नियामकको चेतावनी
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय प्रति सेयर आम्दानी निकाल्न चलिआएको सूत्रलाई छाडेर मनखुशी त्यस्तो आम्दानी निकाल्ने र सोही अनुसार विवरण प्रकाशित गरी लगानीकर्ता झुक्याउने खेल भइरहेको छ । यो खेलमा नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्टबैंक मौन रहे पनि अगुवा लगानीकर्ताहरुले यो प्रवृतिको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । गलत इपीएस निकालेर लगानीकर्तालाई...
बंगलादेश बैंकको सेयर सस्तोमै किन्ने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंकले बिक्री नभएको ९ लाख ८८ हजार १ सय २०.८० कित्ता हकप्रद बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले आगामी असार १४ गतेदेखि बिक्री नभएको सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो । यो बैंकले बैशाख ७ गतेदेखि १० बराबर ८ को अनुपातमा हकप्रद निश्कासन गरेको थियो । निश्कासित हकप्रदमध्ये साधारणतर्फ ९ लाख ६८ हजार ६ सय ९.८० र...